Wednesday 28th June 2017 11:16:29 in Wararka by Super Admin
Hargeysa (Karin-News):- Somaliland waxa ay noqotay hoy lagu soo qaato mashaariico iyo lacago tiro badan oo aan xisaab iyo is waydiin midna lahayn cidna aan su’aal laga waydiinayn waxaana jira mashruuc la dhaho Hiil Hooyo oo hore Sirdoonka qaranka Somaliland u joojiyeen ka dib markii la ogaaday in uu Somaliwayn yahay in mudo badan Somaliland laga waday laguna bixin jiray siminaaro iyo barnaamijyo ku saab san somaliwayn.
Mashruucaasi waxa wata nin Gudoomiyaha Jaaliyada Somaliland ee Finland oo lagu magacaabo Xasan Qadimaaye kaasi oo lacag tiro badan ku qaata mashruucan guud ahaan shaqsiyaadka iyo jaaliyada Somaliland kaligii ayaa kaga jira halka dadka kale ay yihiin Somaliwayn waxaana Mashruucan laga fuliyaa Hargeysa, Garoowe, Muqdisho. Boosaaso iyo meeo kale oo markii danbe loo guuray.
Lacagta Mashruucan loo ogolaaday in Hargeysa laga fuliyo ee sida tuugada ah loo fulinayo ayaa waxa ay u dhigan tahay sidan. 2017: 219 436 € 2018: 187 738 € TOTAL Guud 407174€ taasi oo ah xadi aad u tiro badan.
Somaliland wax talaabo ah kama qaadin Xasan Qadimaaye oo ah nin tuug ah qarankiisana lacag dhaafsiistay warna kama hayaan mana oga jaaliyada uu magaceeda ku cunayo lacagaha intaa leeg sido kale waxa xusid mudan in xiligan ay dalka ku sugan yihiin isaga iyo koox kale oo Puntland iyo xamar ka socota kuwaasi oo dadaal ugu jira sidii ay Somaland u baabiin lahaayeen xukuumaduna way moogan tahay.